Efa niteny ireo andriamanitra gidro ary nanoratra boky i Scott Adams! | Martech Zone
Efa niteny ireo andriamanitra gidro ary nanoratra boky i Scott Adams!
Talata, Oktobra 23, 2007 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Cartoonist Scott Adams dia namoaka boky misy fanoratana avy amin'ny bilaoginy, Mifikira amin'ny sary an-tsary mampihomehy, atidoha rajako !: Tsy miraharaha torohevitra mahasoa ny mpanao sariitatra. Efa ela aho no namaky ny bilaogin'i Scott ary, hatreto, ny bilaogy mahatsikaiky indrindra Efa namaky aho.
Ity misy sombiny iray avy amin'i Scott lahatsoratra farany tamin'ny India Monkey Attack:
Araka ny filazan'ny BBC, ny Hindoa mpivavaka dia mihevitra ny rajako no fisehoan'ny andriamanitra gidro Hanuman. Avelao aho hirotsaka hivoaka eto ary hibaboka fa afaka manoratra ny teny hoe "andriamanitra gidro" tontolo andro aho, ary ny fanaovana izany dia hahafaly ahy isaky ny mandeha. Noho ny antony mahafinaritra, io fitambaran-teny hoe "andriamanitra gidro" io dia mamoaka serotoninina kely mivantana mankany amin'ny faritry ny ati-dohako izay tena tia azy indrindra.
Andriamanitra rajako… andriamanitra gidro… andriamanitra gidro… Aaaaah, izany no tiako holazaina? momba.
Ho an'izay nandany ny fiainany tao amin'ny cubicle amerikanina orinasa dia tsy isalasalana fa nahita farafara iray farafaharatsiny ianao naka ny manodidina ny birao. Ny fahaizan'i Scott Adams amin'ny maha mpanoratra azy dia mifanentana amin'ny vazivazy an-tsary. Heveriko fa porofo izany fa tsy fahaiza-manao kisendrasendra ny fahaizana sy ny fahombiazana. Ny sasany amin'ireo lahatsoratro tiako indrindra dia ny nizara ny fiteny na ny sarimiaina izay tsy tafavoaka tamin'ny dingana sivana tamin'ny fizotran'ny fandefasana.
Mirary soa indrindra ho an'i Scott sy ny bokiny. Inona no ifandraisan'izany amin'ny Teknolojia Marketing? Heveriko fa tantara maharesy lahatra fa afaka mamadika bilaogy ho boky ny olona. Seth Godin no nanao an'io Kely no lehibe vaventy: ary 183 Riff, Rants, ary hevi-barotra mahavariana hafa, Chris Baggott no nanao an'io Marketing amin'ny mailaka amin'ny isa: Ahoana ny fampiasana ny fitaovana marketing lehibe indrindra eto an-tany hitondra ny fandaminana amin'ny dingana manaraka ary ankehitriny dia manao izany amin'ny bokiny i Scott.
Ho an'ny orinasa, ny fanoratana boky dia mitondra fahatokisana kely. Ny fitorahana bilaogy dia mety hitarika amin'ny fanoratana boky mety ho zavatra tokony hodinihin'ny orinasa rehetra! Fantatro fa izaho!
Raha niresaka boky aho dia nivavaka tany Amazon androany ary nividy vitsivitsy vitsivitsy! Boky mpivarotra maromaro kokoa sy boky momba ny Fanovana ny Rafitra fanaraha-maso kinova no efa handeha.
Tags: dilbertboky marketingandriamanitra gidroscott adamsseth godin
Ahoana no nanomanan'ny Order of Operations ahy amin'ny Programming
Inona no mandalo anao?